Vakiana fotsiny sisa ny tànana e! | 102 KARA
Vakiana fotsiny sisa ny tànana e!
Ny fahitan’ny sekretara jeneralin’ny firenena mikambana an’i Madagasikara.
MAHAVAKY FO: izay no azo ibangoana ny kabarin’ny sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana Ban-Ki MOON nanoloana ireo parlemantera tetsy amin’ny Lapan’izy ireo tetsy Anosy.
FAHAVOAZANA IRAY LAVAKA no mahazo an’i Madagasikara hoy izy, eo amin’ny fikorosin’ny toe-kareny, ny fahantrana, ny tsy fahampian-tsakafo mahazo ny Malagasy.
Mbola noatitrateriny ihany koa izany tamin’ny valan-dresaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha, ka niarahany tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Manoloana ireo senatera sy ny solombavambahoaka ary, no namakian’ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana bantsilana, fa MAMPIAHIAHY sy MAMPIVALA–KETRAKA tokoa ny mahita ny fahantrana sy ny fitarozaky ny toe-draharaha maro eto Madagasikara :
-tsy lazaina intsony ny ftomboan’ny tsy an’asa
-zara raha mba hita manangasanga izany fitombon’ny harin-karena faobe izany
– na hatramin’ny rano madio fisotro aza hoy izy dia zara raha misy tsiririn-jinga.
Voatenin’ny sekeretera jeneralin’ny Firenena mikambana ihany koa fa mandalo fotoan-tsarotra ny fanabeazana malagasy, indrindra fa ny fanabeazana fototra. Mitombo ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly. Manampy trotraka izany rehetra izany, hoy ihany izy, dia ny tsy fahafahan’ny rehetra mahazo fitsarana ara-drariny sy marin-danja ka tsy mitanila.
Eo ihany koa risoriso isan’ambaratonga sy ny fanaovana baroa ny harem-pirenena.
Mbola NOFINOFY ihany koa hoy izy izany fanajana ny zo maha-olona izany, ny fanajana lalàna, eny fa hatramin’ny lalàna fahafahana maneho hevitra. Tsy mbola mipetraka izany na eo amin’ny rantsana fanaovan-gazety sy ny fampahalalam-baovao isan-karazany.
Koa manana ANDRAIKITRA lehibe tokoa ioanareo parlemantera, hoy ihany Andriamatoa BAN-Ki MOON, eo amin’ny fampandrosoam-pirenena.
Tsara sy meva ry mijoalajoala tokoa ny Lapa fivorianareo, kanefa tsy izany no hampatanjaka ny rafitra tiana hajoro, fa ianareo mihintsy no tompo-marika vaolohany amin’ny famolavolana izany.
Raha tiana hisongadina ny fahombiazana dia tokony ho mafy ny fototry ny FIFAMPITOKISANA eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra.
Na misy FISAVOROVOROANA aza dia tsy maintsy katsahina ny FILANTOANA eo amin’ny sehatra rehetra ka tsy ho hadinoina amin’izany ny tena FAMPIHAVANANA MARINA fa tsy SARINTSARINY na FIHATSARAM-BELATSINY fotsiny.
Toa izay raha bangoina ny tenin’ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana toy ny milaza ihany koa hoe : « Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby fa atsipy kosa ny teny ao am-pon’ny mahalala.
Dia hoy aho ana-kam-po hoe : « raha izany no tanteraka dia hanjaka tokoa ny fehezan-teny ao amin’ny hiram-pirenena manao hoe :
HE SAMBATRA TOKOA IZAHAY……
…..SAINGY RAHOVIANA TOMPOKO O ?
15 mai 2016 - 23 h 30 min Politique 852 vues